ထူးခြား တဲ့ လာနီညာ (အအေးလှိုင်း) ဖြစ် စဥ်တွေ နဲ့ ကြုံတွေ့ရမယ့် အခြေအနေ (အများ သိအောင် ရှယ်ထားပေးပါအုံး ….) – GaMone Media
Homepage / Local News / ထူးခြား တဲ့ လာနီညာ (အအေးလှိုင်း) ဖြစ် စဥ်တွေ နဲ့ ကြုံတွေ့ရမယ့် အခြေအနေ (အများ သိအောင် ရှယ်ထားပေးပါအုံး ….)
ထူးခြား တဲ့ လာနီညာ (အအေးလှိုင်း) ဖြစ် စဥ်တွေ နဲ့ ကြုံတွေ့ရမယ့် အခြေအနေ (အများ သိအောင် ရှယ်ထားပေးပါအုံး ….)
ဒီရက်သတ္တပါတ်ကတော့ အားပျော့တဲ့ လေပွေလှိုင်းလေး တခု အရှေ့မှ အနောက်ဘက် ကို ဖြတ်စရာရှိတာက လွဲလို့ ပြင်းထန်ထူးခြားမိုးလေဝသအခြေအနေ သိပ်မရှိပါ။
ထူးခြားနေတာက ယခုနှစ်ကြုံတွေရတဲ့ လာနီညာဖြစ်စဥ် (ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အလယ်ပိုင်း ပင်လယ်ရေ အပူချိန် လျော့ကျဖေါက်ပြန်မှု) တနည်းအားဖြင့် အေးသော အစွန်းရောက် ရာသီဖေါက်ပြန်မှုဟာ ယခင်က ဖြစ်ဘူးသော လာနီညာဖြစ်စဥ်များနဲ့ ကွဲပြားစွာ ဖြစ်နေခြင်းပါ။
ကျန်ဒေသတွေမှာ ဒီတပါတ်အတွင်း မိုးကင်းပြီး ညအပူချိန်သာ ဆက်လက် လျော့ကျ အေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကချင်စစ်ကိုင်းအထက် ချင်းပြည်နယ် ရှမ်းမြောက်နဲ့ ကယားပြည်တွေက ဆက်လက်အေးနေဆဲ ဖြစ်နေပါမယ်။ ပဲခူး မကွေး ရှမ်းတောင် ရခိုင်ရိုးမ တွေမှာ မြူထူဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်တပါတ် မှာ ထပ်မံတင်ပြပါမယ်။
ဒီရက္သတၱပါတ္ကေတာ့ အားေပ်ာ့တဲ့ ေလေပြလႈိင္းေလး တခု အေရွ႕မွ အေနာက္ဘက္ ကို ျဖတ္စရာရွိတာက လြဲလို႔ ျပင္းထန္ထူးျခားမိုးေလဝသအေျခအေန သိပ္မရွိပါ။
ထူးျခားေနတာက ယခုႏွစ္ႀကဳံေတြရတဲ့ လာနီညာျဖစ္စဥ္ (ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အလယ္ပိုင္း ပင္လယ္ေရ အပူခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေဖါက္ျပန္မႈ) တနည္းအားျဖင့္ ေအးေသာ အစြန္းေရာက္ ရာသီေဖါက္ျပန္မႈဟာ ယခင္က ျဖစ္ဘူးေသာ လာနီညာျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ ကြဲျပားစြာ ျဖစ္ေနျခင္းပါ။
က်န္ေဒသေတြမွာ ဒီတပါတ္အတြင္း မိုးကင္းၿပီး ညအပူခ်ိန္သာ ဆက္လက္ ေလ်ာ့က် ေအးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္စစ္ကိုင္းအထက္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမ္းေျမာက္နဲ႔ ကယားျပည္ေတြက ဆက္လက္ေအးေနဆဲ ျဖစ္ေနပါမယ္။ ပဲခူး မေကြး ရွမ္းေတာင္ ရခိုင္႐ိုးမ ေတြမွာ ျမဴထူဆိုင္းႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တပါတ္ မွာ ထပ္မံတင္ျပပါမယ္။
Previous post အလန်းစား ပုံစံလေး နဲ့ ပုရိသတွေ ကြွေသွားစေ့မယ် ပုံတွေ တင်ပေး လိုက်တဲ့ နန်းမွေ့စံ
Next post ကြည့်မိ သူတိုင်း မရိုး မယွ ဖြစ်သွား စေမယ့် စုလှိုင်ဝင်း ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို